Galmudug oo Puntland u gacan gelisay nin loo heysto weerar ka dhacaya Gaalkacyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaalkacyo – Mareeg.com: Maamulka Galmudug ee xarruntiisu tahay Koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa nin ku eedeysan inuu ka mid ahaa raga dhawaan weeraray goob lagu shaaho oo ku taalla woqooyiga Gaalkacyo ku wareejiyey maamulka Puntland.
Wararka ka imaanaya Gaalkacyo ayaa sheegaya in ninkaan iyo koox kale oo weeraray meel lagu shaaho oo ku taalla xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo uu u baxsaday dhanka xaafadda Baraxley ee koonfurta magaalada.
Weerarka habeenkii arbacada lagu qaaday meel ku taalla xaafadda Garsoor ayaa waxaa ku dhaawacmay 4 qof oo rayid ah, waxaana durba goobta gaaray booliska Puntland oo rasaas ku furay ragii weerarka geystay.
Booliiska Galmudug oo soo qabtay ninkan oo dhaawac ah ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay qalabkii uu ninkan watay kadib markii ay tageen gurigii uu ka degenaa xaafada Baraxley.
Qalabka laga soo helay gurigaasi ayaa waxaa kamid ahaa qoraal iyo waliba daawooyin, bistoolad iyo rasaas. Qoraalada laga helay ninkan ayaa waxaa kamid ahaa buug ay ku qornaayeen magacyada dad kale gedisan oo ku kala nool Puntland iyo Galmudug.
Booliiska Puntland ayaa baaraya in dadkan yihiin kuwo la bartimaamsanayey oo la doonayey in la khaarajiyo iyo waliba ninka la qabtay kooxdii la socotay oo weli qaarkood aan lasoo qaban.
Magaalada Gaalkacyo ayey horey uga dhaceen dilal qorsheysan oo lala beegsaday dad isugu jira mas’uuliyiin dowlada, issimo, ganacsato, culumaa’udiin iyo waliba saxaafadda.
Dilalkaasi ayaa in badan shaki dadku ka qabeen in ay la xariirto aano qabiil, balse dadka intiisa badan iyo waliba hay’adaha amaanka ayaa rumeysan in falalkaasi ay yihiin kuwo qorsheysan oo ay soo abaabushay Al Shabaab.
Labada maamul ee Galmudug iyo Puntland ayeysan ka dhaxeyn wax wada shaqeyn xilligi hore, waxaana tilaabadan loo arkay mid labada dhinac isaga kaashanayaan la dagaallanka kooxaha weerarada ka geysta magaaadaas.
Xaalada magaalada Gaalkacyo ayaa maalmihii lasoo dhaafay deganeyd, weerarkii habeen hore ka dhacay xaafada Garsoor ayaa ahaa kii ugu horeeyey oo lagu guuleysatay in lasoo qabto qaar kamid ah kooxihii geystay falkaasi.